आगामी वर्षबाट प्रदूषणरहित इट्टाभट्टा सञ्चालनको तयारीमा छौं | गृहपृष्ठ
Home बजार आगामी वर्षबाट प्रदूषणरहित इट्टाभट्टा सञ्चालनको तयारीमा छौं
आगामी वर्षबाट प्रदूषणरहित इट्टाभट्टा सञ्चालनको तयारीमा छौं
जितेन्द्र खायमली, अध्यक्ष, काभ्रे इट्टा उद्योग सङ्घ
स्थानीय जनता र नगरपालिकासमेत एक मतले काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाभित्र प्रदूषण फैलाएको भन्दै फिक्स चिम्नी इट्टाभट्टा सञ्चालन गर्न नदिने पक्षमा गएपछि आगामी वर्षदेखि त्यहाँका सातओटा इट्टाभट्टा हटाउन व्यवसायीलाई चर्को दबाब परेको छ । तरकारी बाली नष्ट भएका कारण इट्टाभट्टा व्यवसायीले किसानलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिँदै आएका छन् । चिम्नी भट्टाको विकल्पमा वातावरणलाई प्रदूषित नबनाउने वैकल्पिक इट्टा उत्पादनमा नगरपालिकाले समेत सहयोग गर्ने पाँचखालका प्रमुख महेश खरेलले वचन दिएपछि परम्परागत भट्टा हटाएर सुधारिएको प्रदूषणरहित इट्टा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सन्दर्भमा काभ्रे इट्टा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र खायमलीससँग आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले गरेको वार्ताको अंश :
अहिले पाँचखालमा कतिओटा इट्टा उद्योग सञ्चालनमा छन् र तिनको उत्पादन क्षमता कस्तो छ ?
पाँचखालमा सातओटा इट्टाभट्टा सञ्चालनमा छन् । हरेक इट्टाभट्टाबाट २० देखि ५० लाखको हाराहारीमा इट्टा उत्पादन भइरहेको छ । ठूला र बढी क्षमता भएका भट्टाले बार्षिक ५० लाखसम्म र साना भट्टाले २० लाखसम्म इट्टा उत्पादन गर्छन् ।
यहाँको इट्टा काभ्रेबाहेक बाह्रबिसे, चौतारा र दोलखासम्म पुग्ने गरेको छ । भूकम्पमा सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति भएका जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम धेरै भइरहेकाले त्यहाँबाट इट्टाको माग धेरै आइरहेको छ ।
१ नम्बर र २ नम्बरको इट्टा सामान्यतया कसरी विक्री गरिरहनु भएको छ ?
इट्टाको गुणस्तर तथा फिनिसिङ हेरेर १ नम्बर इट्टाको रू. १४ देखि १५ र २ नम्बरको रू. १२ देखि १३ का दरले हामीले इट्टा विक्री गरिरहेका छौं ।
तपाईहरूले क्रेतालाई इट्टा विक्रीको भ्याट बिल नदिएर कर छली गरिरहनुभएको पाइएको छ, यो त राज्यको चोरी गरेको भएन र ?
त्यस्तो पाइयो भने व्यवसायीले गलत गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तालाई कारबाही गर्न सरकार पछाडि पर्नुहु“दैन । यद्यपि सबै व्यवसायीले सबै कुरा जानेकै हुन्छन् भन्ने पनि हु“दैन । वास्तवमा भ्याट बिल काटिएकै हुन्छ । बिलको हामीले चलानी राखेका हुन्छौं ।
केही समयपहिले पाँचखालका इट्टा व्यवसायी, स्थानीय र नगरपालिकाको संयुक्त बैठक बसेर आगामी वर्षदेखि इट्टाभट्टा हटाउने निर्णय गरियो, अब आगामी वर्षबाट यहाँका भट्टा हट्छन् त ?
इट्टाभट्टालाई मानिसले प्रदूषण उत्पन्न गराउने उद्योगको रूपमा लिएका छन् । एउटै विषयलाई धेरै केलाउँदा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष भेटिन्छन् नै । पाँचखाल कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक बिषादीको प्रयोगबाट यहाँका धेरै मानिस क्यान्सरपीडित भएका छन् भनेको पनि सुनिएकै छ । हामी कतिसम्म कुरालाई ग्रहण गर्न सक्छौं भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ । इट्टाभट्टाबाट विसर्जित धुवाँ र धुलोको सरकारी मापदण्डअनुरूप सुपरिवेक्षणचाहिँ हुनैपर्छ । सरकारले दिएको मापदण्डभित्र रहेर इट्टाभट्टा सञ्चालन भएका छन् भने किन हटाउनु पर्‍यो भन्ने हाम्रो प्रश्न छ । नगरपालिका प्रमुख र यहा“का स्थानीय जनताको एउटा संयुक्त बैठक आयोजना भएको थियो । त्यसमा स्थानीय पक्षबाट इट्टा व्यवसायीलाई इट्टाभट्टा हटाउनुपर्छ भनेर दबाब दिइएको थियो । विकसित प्रविधिबाट इट्टाभट्टा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नगरपालिकाप्रमुखको मान्यता रहेको छ । अहिलेको प्रविधिलाई विस्थापित गरेर नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ भन्ने आशय त्यस बैठकबाट आएको थियो तर प्रविधि एकै वर्षमा परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था छैन । बौद्धिक र प्राविधिक पक्षबाट पनि यो कुरा बुझिएकै छ । नयाँ प्रविधिबारे अहिले हामी अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छौं । हरेक देशले छुट्टाछुट्टै प्रविधि अँगालेका छन् । इट्टाभट्टा सङ्घले अहिले सार्कस्तरीय बैठकको आयोजना गरेको छ । भारतमा डेढ लाख, पाकिस्तानमा २० हजार, बङ्गलादेशमा १७ हजार र नेपालमा १ हजारको हाराहारीमा इट्टाभट्टा सञ्चालनमा छन् । यी चारओटै देशमध्ये सबैभन्दा राम्रो प्रविधि नेपालमा प्रयोग भएको पाइएको छ । धुवाँलाई सीधा नपठाई घुमाउरो पारेर पठाउने जिगज्याक र धुवाँमा भएका कण इट्टामै रही बाफ मात्र उडेर जाने प्रविधि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं । यसलाई अझै पनि सुधार्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
नयाँ प्रविधिको प्रदूषणरहित इँटाभट्टा स्थापना गर्न चाहने व्यवसायीलाई नगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ भनिरहेको छ । तपाईंहरू वातावरण प्रदूषणरहित प्रविधि ल्याउन तयार हुनुहुन्छ ?
प्रविधिको हकमा व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर राम्रो जानकारी राख्ने र राम्रोसँग इट्टाभट्टाको अनुसन्धान हुन्छ भने त्यसो गर्न हामी तयार छौं । नयाँ प्रविधि भित्र्याउन एउटा मात्रै क्षेत्रले राम्रोसँग जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन । यद्यपि इट्टा उत्पादनको निम्ति प्रदूषणरहित नयाँ प्रविधि ल्याउन हामी तयार छौं ।
आगामी वर्षदेखि नयाँ प्रविधिमा जान अहिलेसम्म केकस्ता अध्ययन गरिए त ?
अहिले सरकारले पनि नयाँनयाँ प्रविधि ल्याएको छ । त्यस्ता प्रविधि सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा धेरै बाहिर रहेको अवस्था पनि छ । टनेलक्लुयिन प्रविधिमा एउटा इट्टाभट्टा स्थापना गर्न करीब २० देखि ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । हाइब्रिड हबम्यान क्लिन प्रविधिमा एउटा इट्टाभट्टा स्थापना गर्न १५ देखि २० करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । नेचुरल ड्राफ्ट हबम्यान क्लिन, फोर्सड्राफ्ट हबम्यान क्लिन भन्ने प्रविधि पनि प्रचलनमा छन् । अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेको जिगज्याक फोर्स ड्राफ्ट प्रविधि हो । यदि नगरपालिकाले हाम्रो पनि प्रमोट हुने, कर छूट हुने र स्थानीय जनताले पनि सहयोग गर्ने हो भने हामी नयाँ प्रविधिमा जान तयार छौं ।
स्थानीय, जनप्रतिनिधि र इट्टा व्यवसायीको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय जनताको चित्त बुझेको खण्डमा मात्र इट्टाभट्टा राख्न पाइने अन्यथा नगरपालिकाले भट्टा हटाउने भनेको छ । यसमा स्थानीयको भनाइ के छ ?
नगरपालिकामा त्यस्तो निर्णय भएको हो । तर, स्थानीयद्वारा इट्टाभट्टाबाट हामीलाई सहुलियत दरमा इट्टा चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरी बाटो बन्द गर्नेजस्ता क्रियाकलाप पनि भए । स्थानीयको हामीलाई पनि सहयोग चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा सहुलियत दरमा भूकम्पप्रभावित स्थानीयलाई इट्टा उपलब्ध गराएका छौं । एउटा भट्टाबाट अहिलेसम्ममा ९० देखि ९५ घरपरिवारलाई सहुलियत दरमा इट्टा वितरण गरिसकिएको छ । नजिकका भूकम्पपीडितलाई एउटा घरबराबर ५ हजार ओटा इट्टा ११ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले उपलब्ध गराइरहेका छौं । हामीले बढीभन्दा बढी मानिसलाई सहुलियत दरमा इट्टा उपलब्ध गराउने हिसाबले एउटा घरलाई ५ हजारका दरले इट्टा उपलब्ध गराएका हौं ।
आगामी वर्षदेखि पाँचखालका इट्टा व्यवसायी सुधारिएको प्रदूषणरहित इट्टा उत्पादनमा लाग्छौं, होइन त ?
हो, आगामी वर्षदेखि हामी यसतर्फ लाग्छौं । यद्यपि ऐनकानुनअनुसार नेपालका जुनसुकै स्थानमा गएर पनि उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछौं र उद्योग गर्नसक्ने वातावरण हाम्रा नेताहरूले बनाइदिनु पर्छ । इट्टाभट्टाबाट प्रदूषण भइरहेको छ र यसले प्रदूषण गर्छ भन्ने हो भने नेपाल सरकारले इट्टाको विकल्पको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ ।